Archive du 20170925
Marc Ravalomanana “Vitantsika ny mampandroso an’i Madagasikara”
Nitsidika ny tapany avaratra atsinanan’ny nosy ao anatin’ny faritra Analanjirofo amin’ny lalam-pirenena faha -5 (RN5) iny ny faran’ny herinandro teo Atoa Marc Ravalomanana.
Olona hasin’ny tany Miomana hitondra firenena
Tontosa ny sabotsy teo teny Antaninarenina rehefa naharitra roa andro ny filankevi-pirenena notanterahin’ny fikambanana Olona Hasin’ny tany.
Fifidianana sefom-pokontany « Mazava ny ambaran’ny lalàna”, hoy i Thierry Rakotonarivo
Teboka iray noresahan’ny filohan’ny Repoblika nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety herinandro lasa izay ny mikasika ny sata mifehy ny fokontany.
Taratasin’i Jean Aleo mifampiresaka
Miarahaba Jean a ! Mankasitraka ny fampandeferana ny hambom-ponareo aloha ka nanaiky ilay fifampidinihina natao tamin’ny sabotsy e ! Izay foana ianareo !
Fitrandrahana ao Ambinaninony - Ambatolampy Mety hivadika Soamahamanina 2
Mitohy hatrany ny fanoheran’ireo mponina ao amin’ny fokontanin’Ambatolampy, kaominina Ambinaninony, ny asa fitrandrahana harena ankibon’ny tany ataona orinasa kanadianina iray any an-toerana.
Raharaha mafampana eto Madagasikara Tsy ampy tetibola hanaovan’ny mpanao gazety fanadihadiana
Nifarana tamin’ny herinandro teo ny fiofanana nomena ireo solontenan’ny mpanao gazety avy amin’ny faritra 22 mikasika ny fomba fanaovana fanadihadiana lalina eo amin’ny asa fanaovan-gazety na ny « Journalisme d’investigation ».
Maka toerana tokoa !
Mampalahelo ny maheno sy mahita teratany Sinoa mampiditra malagasy any am-ponja, hoy ny mpitarika fikambanana iray. Raha tsy olo-meloka ilay teratany Malagasy, rariny ve raha izay no zava-miseho ?
Minisiteran’ny tontolo iainana Nandefasan’ny Mpamaky vato taratasy
Velon-taraina ireo fokonolona mivelona amin’ny famakiana vato ao amin’ny ala arovan’i Maromizaha, Andasibe, noho ny fisiana taratasy voarain’izy ireo avy amin’ny minisiteran’ny tontolo iainana mandidy ny fokonolona hampitsahatra ny asany ao anatin’ny faritra arovana ity.
Kick boxing - Antsirabe Fahombiazana ny hetsika “Mazana 110”
Fahombiazana tanteraka ilay lalao iraisam-pirenana nampitondraina ny anarana « Mazana 110 », notontosaina tao amin’ny kianja Tsarasaotra Antsirabe ny sabotsy 23 septambra lasa teo.
Vahoaka Malagasy Efa tena noana sy reraka
Efa tena noana ny vahoaka Malagasy ankehitriny, hoy Rabetsara Lita, filohan’ny fikambanana RNDC mpiaro ny zon’ny mpanjifa.
Fitsarana ny raharaha “ANNIE SY ARNAUD” Hipoitra ve ny marina ?
Efa ela niandrasana ny fitsarana ny raharaha fakana an-keriny an’i “Annie sy Arnaud” ny maro. Raha ny fandaminana teo anivon’ny fitsarana ady heloka be vava ny fitsarana ambonin’Antananarivo sy ireo taratasy voarain’ireo “vavolombelona” sy ireo “voarohirohy”,
Tahirim-bola iraisam-pirenena Tsy afa-po amin’ny fitantanana eto Madagasikara
Nivoatra ny zava-misy amin’ny ankapobeny eto Madagasikara raha ny programa Fec (Facilité Elargie de Crédit) no resahana, hoy ny FMI (Fonds Monétaire International).
Taom-baovao iraisan’ny Malagasy Tsy mifanipaka amin’ny fomba Kristianina
Efa niroso ihany ilay fankalazana ny “Taom-baovao Iraisan’ny Malagasy”, raha tarafina tamin’ny hetsika tao Antsirabe.
Ady amin’ny mahadomelina Hitety sekoly ny Ong Ny Sahy
Efa saika miverina any an-dakilasy avokoa ireo ankizy mpianatra eto an-drenivohitra sy ny manodidina amin’izao fotoana.
Rehefa avy nanatrika ny fihaonana an-tampony faha 72-n’ny firenena mikambana tany New york, Etazonia, ny filoham-pirenena malagasy, Hery Rajaonarimampianina, dia vina manaraka indray ankehitriny ny famitranana ny fifandraisana diplaomatika eo amin’ny fanjakana malagasy sy Italianina